फिफा विश्वकपमा कसले लैजाला गोल्डेन बुट ! – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
फिफा विश्वकपमा कसले लैजाला गोल्डेन बुट !
प्रकाशित: २०७५ असार २४ गते १२:०७
एजेन्सी – रसियामा जारी फिफा विश्वकपका क्वार्टरफाइनल खेलहरु शनिबार सकिएका छन् । सेमिफाइनल खेल मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ । विश्वकपका ६४ खेलमध्ये ६० खेल भइसकेका छन् । अहिलेसम्म सम्पन्न खेलमा सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी, सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने राष्ट्र र सबैभन्दा बढी गोलका लागि प्रयास गर्ने खेलाडी को–को हुन् त ?
नेयमारले खेलेका ५ खेलमा उनले विपक्षी टिमको पोस्टमा २७ पटक प्रहार गरेका छन् । यी प्रहारमध्ये १३ प्रहार गोल पोस्टतिर गरेका छन् भने पाँच प्रहार ‘अफ टार्गेट’ भएका छन् । यस्तै उनका नौवटा प्रहारलाई विपक्षी डिफेन्डर र गोलरक्षकले रोकिदिएका थिए ।